Native Mogok: February 2009
What is RAW? and Camera RAW Image File Thumbnails View in Window XP
ကျွန်တော်နှင့် RAW (သို့မဟုတ်) Camera RAW Image File Thumbnails View in Window XP
ဒီ Blog ကို သင်က Proxy ဖြင့်ကြည့်ရှု ရသူ ဖြစ်ပါက
ဒီလိပ်မှာမှာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုပါ http://knol.google.com/k/aung-chan-lin/what-is-raw-and-camera-raw-image-file/ntq185dsc79f/2
RAW ဖိုင်ဆိုတာဘာလဲ What is RAW ?
RAW ဖိုင်အကြောင်းကို http://myanmaritpros.com မှာ ကျွန်တော်သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ကိုမြတ်သူ နဲ့ ကိုဝင်းနိုင် တို့က ဖြေကြား ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဖြေကြားပေးတာဟာ ရိုးရှင်းပြီး နားလည်ရလွယ်ကူစေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ထပ်မံ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်
RAW ကို ဓာတ်ပုံပညာရှင်တိုင်း အသုံးပြုပါတယ်။ သူဟာ high resolution ၇ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကို ပုံကြီးချဲ့ တဲ့ အခါမှ pixel distortion မဖြစ်စေပါဘူး။ file size လည်းကြီးပါတယ်။ သူဟာ high resolution image ရတဲ့ အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ photoshop software တိုင်း RAW file ကို ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ တစ်ချို့ရပါတယ်။ photoshop install လုပ်တဲ့အခါ file extension မှာ RAW ကို ရွေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။
Jpeg ကတော့ Joint Photography Expert Group လို့ အရှည်ခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ image resolution တွေကို compress လုပ်ပြစ်ပါတယ်။ jpeg နဲ့ ဖိုင်သိမ်းတိုင်း ချုံ့ပစ်တာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ အရောင်တွေ၊ ပုံတွေဟာ ပျောက်သွား ပျက်သွားပါတယ်။ pixel distortion ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ပုံထုတ်တဲ့ အချိန်၊ ပုံကြီးချဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ jpeg ဟာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါဟာ အကြမ်းပြင်ပါ။ အလွယ်ကူဆုံး အနေနဲ့ အသေးစိတ်ကို http://www.wikipedia.org/ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။
ကျနော်က professional ဓါတ်ပုံပညာရှင်တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ...
(၁) Raw ဆိုတာဘာလဲ ?
(၂) ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ၊ အသုံးဝင်လဲ ?
(၃) အခြား ဖိုင်Type တွေနဲ့ ဘာတွေကွာခြားသလဲ ? လို့မေးထားတာတွေထဲက Raw file တွေအကြောင်းကတော့ internet ပေါ်မှာ ရှာဖွေလေ့လာလိုက်ရင် တော်တော်လေးသိသွားပါလိမ့်မယ်။ ဖြေထားတဲ့သူတွေလဲ တော်တော်လေးဖြေထားရှင်းပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုမြတ်သူဖြေထားပေးတာတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပါပြီ။
Raw Format နဲ့ DSLR ကင်မရာတိုင်းလိုလိုမှာ ရိုက်လို့ရနေပါပြီ၊ အဲဒီမှာ ကင်မရာရဲ့ sensor အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီး raw format မတူတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ Raw File ဆိုရာမှာ Camera Raw ဆိုမှ ပိုပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။ Wiki ပေါ်မှာ ကင်မရာအမျိုးအစားအလိုက် ကင်မရာ raw file extension တွေ ကွာခြားတာကို အခုလိုဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် -
Camera မှာတပ်ထားတဲ့ Sensor တွေကတော့ ကင်မရာထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပေါ်မူတည်ပြီး CCD နဲ့ CMOS ဆိုတဲ့ ၂မျိုးသာရှိပါတယ်။ သူတို့ကမှတစ်ဆင့်ထပ်ပွားသွားတာတွေကတော့အများကြီးပါ။
ဒါတွေအကြောင်းဆက်ရှင်းနေရရင် တော်တော်လေးများနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်မှဘဲ ဆက်ရှင်းပါတော့မယ်၊ အခုလောလောဆယ် အဓိကကျတဲ့ အချက်လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်။
ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် RAW နဲ့ ရိုက်မှာလဲ ? ဘာကြောင့် RAW နဲ့ ရိုက်စရာမလိုဘူးလဲ ? ဆိုတာရှင်းရှင်း သဘောပေါက်ရင် ရပြီထင်ပါတယ်။
RAW နဲ့ရိုက်တိုင်း ကောင်းတယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မှားမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဥပမာ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာ အခကြေးငွေယူပြီး လိုက်ရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပုံတိုင်းကို RAW နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် အဲသည်ဓါတ်ပုံဆရာဟာ RAW နဲ့ ရိုက်ထားတာတွေကို ဘယ်လောက်အထိအချိန်ပေးပြီး retouch လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာအရင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ခရတာက နည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် လက်ခံထားတဲ့ပွဲဆက်တွေက များနေမယ်ဆိုရင်တော့ RAW နဲ့သာရိုက်ပြီး ပုံကူးပေးမယ်ဆိုရင် အိပ်ချိန်တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ camera raw နဲ့ ပုံတိုင်းကို မရိုက်သင့်ပါဘူး၊ သတို့သမီးပုံနဲ့ ပုံကြီးချဲ့ပေးရမဲ့မိသားစုပုံတွေကလွဲရင် RAW အစား ရိုးရိုး JPEG ဆိုက်ကြီးကြီးနဲ့ ရိုက်ရင်ရပါပြီ။
Bill-Board တွေ၊ Hi-Resolution ပုံထုတ်ပေးရမဲ့ clients တွေအတွက်တော့ RAW နဲ့ ရိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အရောင်မှန်မှန် ပုံပြတ်ပြတ်သားသား၊ ကြည်ကြည်လင်လင်ရဖို့အတွက်ပါ။
ဒါမှ ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံရဲ့ result ကို ထိန်းထားနိုင်မှာလဲ ဖြစ်လို့ပါ။
ဟိုးအရင်ကတော့ ဖလင်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြရာမှာ ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဓါတ်ပုံပညာပါပါနဲ့ အလင်းအမှောင်မှန်မှန်ပေးပြီး ရိုက်နိုင်ရင် ပုံကောင်းတွေထွက်ကြပါတယ်၊ အခုခေတ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြီးရင် ကွန်ပျူတာလဲ ကျွမ်းကျင်မှ၊ software တွေအကြောင်းလဲ သိမှ၊ ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းလဲ ဆင်ထားပြီး ရိုက်လာခဲ့တဲ့ ပုံတွေအတွက်လဲ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင် အချိန်ပေးပြီး ပြင်ရဆင်ရပါတယ်။
အရင်က အမှောင်ခန်းမှာ လုပ်ခဲ့ကြသလို အခု digital dark-room လို့ခေါ်ရမဲ့ photoshop လိုမျိုး application တွေ နိုင်နိုင်နင်းနင်း သုံးနိုင်မှ လူတောတိုးတော့မဲ့ အခြေအနေပါ။
Camera Raw နဲ့ ရိုက်ပြီးရင် အဲဒါကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖွင့်ဖို့ software ရှာရတာလဲ အရင် လောက်မခက်တော့ပါဘူး၊ နောက်လာမဲ့အနာဂတ်မှာတော့ ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေအပြင် Microsoft တို့လိုမျိုးကွန်ပျူတာ ဘီလျံနာကြီးတွေကပါနောက်ထုတ်မဲ့ Windows မှာ Camera Raw ကို Support လုပ်ပြီး ပွဲထုတ်လာတော့မယ်လို့ပြောလာကြပါပြီ၊
Working closely with digital imaging industry leaders including Adobe Systems Inc., Canon Inc., Fuji Photo Film Co. Ltd. and Nikon Corp., Microsoft plans to deliver native support for digital camera RAW images in the next major version of Windows, code-named "Longhorn." လို့ Microsoft and Imaging Industry Leaders Unveil Support for Digital Camera RAW in Windows ခေါင်းစဉ်နဲ့ http://www.nforcershq.com/microsoft-unveils-support-for-digital-camera-raw-in-windows/ မှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ကဲ ကိုအောင်ချမ်းလင်းနဲ့ မိတ်ဆွေများ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ raw ရန် သင့်/မသင့်ကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချင့်ချိန်ကြပါလို့ ပြောပါရစေဗျား။
နောက်တစ်ခုကတော့ Camera RAW Image File Thumbnails View in Window XP ပါ။
ဘာလဲလို့မေးစရာဖြစ်လာပြန်ပါမယ်။ Camera Raw File တွေကို Window ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး ထဲကို ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီတိုင်းဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူး UnKnow File Type ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ်။ Photoshop နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ CS2 နဲ့ အထက် Version တွေမှ သာ ဖွင့်ကြည့် ပြင်ဆင် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အဖြူရောင်ဖိုင်လေးတွေနဲ့သာ ပြပေးနိုင်မှာပါ -
အဲ့ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer ကို ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ပြီး သင့်စက်မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် raw file တွေကို Preview ကြည့်လို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Thumbnailer နဲ့ Preview ကြည့်ရုံအပြင် အောက်ပါအတိုင်း Print လည်း ထုတ်လို့အဆင်ပြေ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Preview ကို အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၄င်း Software အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုတော့ ဒီမှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Link : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C927CCCF-4CB7-4F92-AFAA-6F16663B23B4&displaylang=en
ဒီ Software ရဲ့ Supports ဖြစ်တဲ့ Camera နဲ့ File Type များကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် -
The software supports the following image types:
- Canon EOS RAW images (.crw, .cr2, .tif)
- Nikon Electronic Format images (.nef)
- Bitmap images (.bmp)
- JPEG images (.jpg, .jpe, .jpeg)
- Windows Metafile images (.wmf)
- Tagged Image File Format images (.tif, .tiff)
- Graphics Interchange Format images (.gif)
- Portable Network Graphics images (.png)
Supported camera models include the following:
- Canon EOS Digital Rebel XT
* Nikon D200 support includes display of thumbnails and previews; however, viewing in highest quality mode is not supported.
key word ; What is Raw ? Camera RAW Image File Thumbnails View in Window XP (or) RAW viewer downlaod
Posted by Aung Chan Lin at 8:55 AM3comments
Mandalay Fire 2009
မနေ့က ၉-၂-၂၀၀၉ ရက်နေ့ နေ့လည်ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မန္တလေး မြို့သစ်ဘက်မှာ မီးအကြီးအကျယ် လောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနား ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ဓါတ်ပုံအချို့ ရိုက်ကူး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခြေ (၂၅၀)ကျော် ရပ်ကွက် (၃)ရပ်ကွက် ပါသွားတယ်လို့ လဲ သိရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်က လောင်သလိုလို၊ အရက်ဆိုင်က လောင်တာလိုလို နဲ့ အတိအကျ မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေကို ရှုစားနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ အဆင်ပြေအောင်လို့ Flash အယ်လ်ဘန် ဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကြည့်လိုလျှင် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
အထက်ပါ နေရာတွေမှာမှ အဆင်မပြေသေးရင် ဒီမှာလည်း သွားကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Posted by Aung Chan Lin at 12:25 PM2comments
View thumbnail images for Photoshop PSD
အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ် ဒါပေမယ့်လို့ အသုံးတည့်မယ်လို့တော့ အာမခံချင်ပါတယ်။ Photoshop ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ (.psd) ဖိုင်တွေကို Window Explorer မှာ thumbnail View အဖြစ် ကြည့်ရှုလို့မရပါဘူး။ အဲ့လိုကြည့်လို့မရလို့လည်း Photoshop file တွေထဲက ဓါတ်ပုံရွေးခြယ်ရာမှာ အခက်အခဲ များစွာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် Adobe Bridge (သို့မဟုတ်) ACD see လို Software တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အသုံးပြုရပါတယ်။ အခုတင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Photoshop psd ဖိုင်တွေကို Thumbnail View အဖြစ် ကြည့်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး ဖိုင်ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ မလေးပါဘူး (62 kb)ပဲရှိတာပါ။
(၂) Download ပြီးသွားတာနဲ့ ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ psicon.dll ဖိုင်ကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Common Files\_Adobe\_Shell အဲ့ဒီနေရာမှာ နေရာချထားလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ Shell ဆိုတဲ့ ဖိုင်မရှိရင် ကိုယ်တိုင် Shell ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖိုင်အသစ်ဖွဲ့ပေးလိုက်ပါ။
(၃) ပြီးတာနဲ့ ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ Adobe.reg ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာပါ့မယ် Yes လို့သာဖြေပေးလိုက်ပါ။
(၄) ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေသွားပါပြီ ကြည့်လိုက်ပါဦး Psd ဖိုင်တွေကို။
KeyWord = View thumbnail images for Photoshop PSD
the first post of 2009
Posted by Aung Chan Lin at 11:42 AM0comments
What is RAW? and Camera RAW Image File Thumbnails ...